कपर घाटी, मेक्सिकोमा अद्भुत क्यानियनहरू यात्रा समाचार
कपर घाटी, मेक्सिकोमा अद्भुत घाटीहरू
मारिएला क्यारिल | | सुझावहरू, मेक्सिको
मेक्सिको ऐतिहासिक वा पुरातात्विक र प्राकृतिक, र दुबैसँग अद्भुत साइटहरू छन् कपर घाटी ती उत्तरार्द्धको उदाहरण हो। एउटा अचम्मको परिदृश्य जुन तपाईंलाई अझ थाहा छैन, त्यसैले यदि मेक्सिको तपाईंको यात्रा गन्तव्यहरूको सूचीमा छ भने, यस ठाउँलाई पिरामिड, संग्रहालयहरू र समुद्र तटहरूमा थप्नुहोस्।
यी सुन्दर घाटीहरू राज्यमा छन् चिहुआहुआ, देशको उत्तरपश्चिममा र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिमानामा। यी भूमिहरू असहज र शंकुधारी ज between्गलहरू, उष्णकटिबंधीय प्रजातिहरू र यहाँ सम्मिलित हिमपातको बीचमा रहेको छ क्यान्यन प्रणाली ठूलो र कोलोराडो को ग्रान्ड घाटी भन्दा अधिक प्रभावशाली।
1 कपर घाटी
2 कपर घाटीमा पर्यटन
यो पनि भनिन्छ कपर घाटी र यो धेरै खोलाहरूको अद्भुत श्रृंखला भन्दा बाहेक अरू केही छैन तिनीहरू सिएरा ताराहुमारामा छन्, जैसा कि हामीले भनेझैँ, चिहुआहुआ राज्यमा। यद्यपि हामी सबैलाई संयुक्त राज्य अमेरिका मा कोलोराडो को ग्रान्ड घाटी थाहा छ, यो ठूलो छ, चार गुणा लामो र करीव दुई पटक गहिरो। के तपाइँ यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? प्रभावशाली!
कपर घाटी तिनीहरूसँग thousand० हजार वर्ग किलोमिटर छ र यद्यपि उनीहरूलाई उनीहरूको छिमेकी भनेर चिनिन सकेका छैनन् पर्यटकहरु प्राप्त गर्न राम्रो तयार छ र त्यहाँ धेरै गतिविधिहरू छन् जुन हामी त्यहाँ गर्न सक्दछौं त्यसबाट राम्रो पाउन।
यी खोलाहरू, यी घाटीहरू, ती ताराहुमारसका पुर्खाहरूको घर हो, जसको ब्रह्माण्डोनीले यी भौगोलिक विशेषताहरू संसारको सृजना भएको बेला, जब ढु the्गाहरू अझै तरल भएको, अर्थात् २० करोडभन्दा धेरै वर्ष अघि स्थापना भएको तथ्यको कुरा गर्छ। एक चमत्कार किन तिनीहरूलाई कपर घाटी भनिएको छ? किनकि खोलामा तामाको खानीहरू छन्। सत्य यो हो कि वास्तविकतामा त्यहाँ एक खोला छैन तर धेरै र सबै भन्दा महत्वपूर्ण ती हुन् उरिक, ला सिनफोरोसा, बटोपिलास, क्यान्डमेआ, चनिपास र एल गिगन्ते.
एल गिगन्ते एक विशाल चट्टान हो जुन 885 g1900 मिटर अग्लो छ, क्यान्डमियामा त्यहाँ दुईवटा सुन्दर झरनाहरू छन्, जुन देशको सब भन्दा अग्लो छ, ला सिन्फोरोसामा त्यहाँ दुई किसिमका सुन्दर र प्रख्यात झराहरू पनि छन्, त्यहाँका स्थानहरू बाहेक त्यहाँका स्थानीय समुदाय र उरिक प्रत्यक्ष। उदाहरण को लागी, यो मेक्सिकोको सब भन्दा गहिरो घाटी हो जुन करीव १ XNUMX ०० मिटर गहिरो छ।
कपर घाटीमा पर्यटन
यो भाग्यशाली भन्नु पर्छ एउटा रेल तिनीहरू मार्फत जान्छ र यो अनिवार्य मार्ग हो। ट्रेनको नामबाट जान्छ «एल चीप» यद्यपि यो ट्रेन हो चिहुआहुवा प्रशान्त गर्न, एक रेखा जुन प्रशान्त तट र धेरै शहरहरू जोड्दछ लगभग 673 XNUMX किलोमिटर यात्रा गर्दछ ठ्याक्कै प्रख्यात खोलाहरू पार गर्दै। यो उन्नीसौं शताब्दीको अन्तदेखि हो र चिहुआहुवा शहरमा यसको सुरूवात भएको छ। त्यसो भए यो कुआउटमोक, सान जुआनिटो, क्रेल, डिभिसाडेरो, टमोरिस, एल फुएर्टे र लस मोचिसमा रोकिन्छ।
ट्रेन छोटो र लामो सुरुnelहरूमा जान्छकुलमा 86 37, र un 17 अविस्मरणीय पुलहरू। मार्ग सुन्दर छ र बेंसीहरू बाट भएर गएको पोष्टकार्ड छ। रेल खोलाको माध्यमबाट लस मोचिसको यात्रा गर्छ र १ XNUMX घण्टाको अवधिमा यस्तै गर्छ। यदि तपाईं यति धेरै यात्रा गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईं एकल स्टेशन गर्न सक्नुहुन्छ र फिर्ता आउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईं क्यानियनहरू नजिक जान ट्रेन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर कार वा बसबाट पनि पुग्न सकिन्छ चिहुआहुआबाट, यो करीव पाँच घण्टा हुनेछ, वा हेलिकप्टरबाट दृश्यहरू आनन्द लिन उडान हुनेछ।
रेलको अतिरिक्त, हामीले केबल कार बिर्सनु हुँदैन। उही हो र मेक्सिकोको सबैभन्दा लामो केबल कार र सानो यात्रा द्वारा प्रस्तुत विचार महान छ। यात्रा three० मिटर उचाईमा लगभग तीन किलोमिटर र प्रति घण्टा करीव people०० व्यक्ति बोक्छ। २०१० मा यसको उद्घाटन भएपछि यो तुलनात्मक रूपमा नयाँ छ। अन्य शानदार विचार तपाईंसँग रेस्टुराँ र दृष्टिकोणबाट छ जुन बर्रान्कास पार्कमा छ, राम्रो उचाईमा।
विन्डोज जताततै र एक क्षेत्र संग पारदर्शी भुइँ तिनीहरू मुख्य आकर्षण हो। खान, पिउन र लगभग बादल भित्रबाट फोटो लिनुहोस्। यस बिन्दुमा, रूपक यसको लायक छ, म अनुमान गर्दछु कि यती माथि छ कि तपाईं डर वा चक्कर का कारण छैन यदि त्यसो हो भने तपाईं को लागी साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ जिप राइडर, zip लाइन जस्तै केहि यस्तै चीज हो यद्यपि ठूलो दोहनसँग जुन यात्रीलाई बस्न सकिन्छ, बढी सहज छ।
कपर क्यान्यनको जीप राइडर राम्रो छ र तपाईं मार्फत जानुहुन्छ दुई र आधा किलोमिटर यात्रा। तपाईं उडान! तपाईं पहिले नै ट्रेन द्वारा यात्रा गरिसक्नुभयो, केबल कार सवारी लिनुभयो, दृश्यमा कफि पिए, जिप सवारमा उडान गर्नुभयो र ... यो पालोको पालो थियो। फेराटा मार्फत एक घण्टा र एक आधा यात्रा को प्रस्ताव चट्टान भित्ताहरू चढाई र तल rappelling। तपाईं हिम्मत?
यी उत्तम गतिविधिहरू हुन् जुन एक पर्यटकले कपर घाटीमा गर्न सक्छन्, तर त्यहाँ अधिक आकर्षणहरू छन्। यसभन्दा पहिले हामीले झरनाहरू र वास्तवमा खोलाहरुका बारेमा राम्रा झरनाहरू लुकाउँछौं कुसारारे झरना, बससाची झरना वा उडान ढुone्गाउदाहरण को लागी। यी अन्तिम दुई झरनाहरू २270० र meter०० मिटर अग्लो झरनाहरू छन् र कास्काडा डे बासासाची राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र छन्।
एउटा पौराणिक कथाको अनुसार यो नाम राजाको सुन्दर छोरीको नामबाट आएको हो जसले आफ्ना मंगेतरलाई यति धेरै शर्तहरू लगाए कि उनले भाँचिएको हृदयले शून्यमा हाम फालेर आत्महत्या गर्‍यो। यी प्राकृतिक भ्रमणहरूमा तपाईं थप्न सक्नुहुन्छ ताराहुमारा अभियानहरुमा सांस्कृतिक पैदल यात्रा, बनाउन हामी हिंड्न, शिविर छोड्नवा केही रमाईलो पनि गर्नुहोस् घोडसवारी। त्यहाँ पर्वतीय बाइक सवारीहरू, भ्रमणहरू छन् माछा मार्ने, राफ्टिंग सेतो पानीमा, चट्टान चढ्ने र अधिकका लागि ... शान्त, चरा अवलोकन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » मेक्सिको » कपर घाटी, मेक्सिकोमा अद्भुत घाटीहरू
Segovia मा होसेस डेल रियो डुरातन प्राकृतिक पार्क